आजदेखि देशभर कोरोनाविरुद्धको खोप लगाईंदै - Rastrakokhabar
आजदेखि देशभर कोरोनाविरुद्धको खोप लगाईंदै
१४ माघ २०७७, बुधबार ०७:४५
काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले आजदेखि देशभरका ४ लाख ३० हजार जनालाई खोप लगाउँदैछ । त्यसका लागि आज बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल रूपमा खोपको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले भने खोप लगाउने छैनन् ।
गत बिहीबार भारत सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज कोभिडविरुद्धको खोप नेपाल ल्याइएको थियो । टेकुस्थित राष्ट्रिय खोप भण्डारण केन्द्रको कोल्डचेनमा राखिएको कोभिशिल्ड भ्याक्सिन प्रदेशका खोप भण्डार केन्द्रहरुमा पुगिसकेको छ । कोभिशिल्डको प्रभावकारिता ७० प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत फ्रन्टलाइनरलाई खोप लगाउने बताएको छ । सातै प्रदेशका ६२ अस्पताल र १ सय २० भन्दा बढी खोप केन्द्रहरुबाट खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ ।
अहिले विश्वभर उत्पादन भइरहेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप व्यक्ति आफै जिम्मेवार भएर लगाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले अहिले ल्याएको खोप व्यक्तिलाई स्वेच्छिक रुपमा लगाउन आग्रह गरेको छ ।
सरकारले खोप लगाउनुभन्दा पहिले खोप लगाउने व्यक्तिले मञ्जुरीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ खोप लगाइसकेपछि खोप लगाउने मानिसमा खोपको कुनैपनि असर परेको अवस्थामा सरकार जवाफदेही हुँदैन, व्यक्ति स्वयंले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।
खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले सरकारले व्यक्ति कसैलाई पनि खोप लगाउन बाध्य पार्न नसकिने भएकाले मञ्जुरीनामा लेख्न लगाइने बताएका छन । उनले कोभिशिल्ड विश्वासनीय खोप भएको पनि बताएका छन ।
व्यक्तिलाई मञ्जुरीनामा गराएर खोप लगाउने सरकारी अभियान कानुनविपरित भएको भन्दै केही स्वास्थ्यकर्मीहरुले यो अभियानमा सहभागी नहुनेसमेत घोषणा गरिसकेका छन् ।
कानुनअनुसार खोप प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आएमा, अङ्ग–भङ्ग भएमा खोप उत्पादक कम्पनीले त्यसको क्षतिपूर्ति व्यर्होनुपर्छ । तर, अहिले खोप उत्पादक कम्पनीलाई खोपले जस्तोसुकै असर गरेपनि क्षतिपूर्ति माग दावी गर्दैनौँ भनेर लिखत गरेर खोप आयात भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले पनि कोभिशिल्ड भ्याक्सिनबाट भएको क्षतिपूर्ति मागदावी नगर्ने लिखत गरेर खोप ल्याएको हो । त्यसैले अहिले सरकारले खोप ऐन, २०७२ विपरित व्यक्तिलाई मञ्जुरीनामा गर्न लगाएको छ ।
व्यक्तिको मञ्जुरीनामा गराएर खोप लगाउँदा खोप लगाइसकेपछि खोपको खराब असर देखिएमा व्यक्तिले कानुनअनुसार पाउने क्षतिपूर्तिबाट पनि बञ्चित हुन्छन् ।
सरकारको यो तयारीअनुसार कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसकेपछि स्वास्थ्यमा समस्या आएको अवस्थामा व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने छ । खोप ऐनमा विभिन्न व्यवस्था भएपनि मञ्जुरीनामा दिएर खोप लगाउने व्यक्तिलाई खोपको असर देखिएमा सरकारविरुद्ध वा खोप उत्पादक कम्पनीविरुद्ध कुनै उजूरी वा क्षतिपूर्तिको माग दावी गर्न पाइने छैन । तर सरकारले खोप लगाएपछि स्वास्थ्यमा समस्या आएमा निशुल्क उपचार गर्ने मौखिक जानकारी गराएको छ ।
खोप महाशाखाकाअनुसार अहिलेसम्म पोखरामा ४ हजार, बुटवलमा ८ हजार ८ सय, नेपालगञ्जमा २ हजार ६ सय, धनगढीमा ३ हजार ६ सय, हेटौंडामा ७ हजार ६ सय र विराटनगरमा ९ हजार ६ सय भाइल खोप पुगिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको लागि १२ हजार ५ सय भाइल खोप छुट्याइएको छ ।
Next Post	आजको राशिफल ( वि.सं. २०७७ माघ १४ गते, बुधवार)